सुदूरपश्चिममा ओलीको पक्षमा जनसागर किन उर्लियो ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
२०७७ पुष २५, शनिबार ०७:१८:००
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनस्तरमा चरम वितृष्णा पैदा भइरहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा जनसागर ओइरिएको छ । शुक्रबार धनगडीमा आयोजित सभामा स्वयं ओली पक्षीय नेताहरुले अपेक्षा गरेभन्दा निकै ठूलो उपस्थिति देखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रले समेत योभन्दा निकै कम उपस्थिति हुने आकलन गरेको थियो । सामान्यतः पार्टी एक भएका बेला पनि देख्न नसकिने जनसागर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिएको थियो ।
ओली पक्षले यस उपस्थितिलाई प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदममा जनसमर्थनका रुपमा अथ्र्याएको छ । नेकपाका नेताहरु दुई खेमातिर बाँडिदा जनताले भने आफूहरु ओलीको पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको यस खेमाको ठम्याइ छ । साथै, विभाजन, अस्थिरता र सत्ताको रडाकोप्रति जनता आजित भइसकेको र अब कुनै नेताले कुर्सी नपाएकै आधारमा सिंगो मुलुकले त्यसको मूल्य चुक्ता गर्न नसक्ने कुराको बोध पनि सुदूरपश्चिमका जनताले विभाजनकारी खेमालाई गराएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवापछिका प्रभावशाली नेता भीम रावल हुन् । तर, रावलले पटकपटक आफ्नो पदका निम्ति बार्गेनिङ गर्न मात्र सुदूरपश्चिमलाई प्रयोग गरे, जसले मधेसका नेताहरुले मधेसी जनताको भोको पेट देखाएर आफूले काठमाडौँमा आलिसान दरबार बनाए । भीम रावलले आफूले पद पाए सब ठीक, नपाएपछि सब बेठीक भन्ने विकृत सिद्धान्तलाई शत प्रतिशत अंगीकार गरे । सुदूरपश्चिममा आफूबाहेक अर्को क्षमतावान् नेता उदाउन थालेपछि घाँटी रेट्ने नीति लिए ।
पार्टी र राज्यका हरेक अवसरमा सुदूरपश्चिममा अछामको सर्वसत्ता हुनुपर्ने, त्यसमा पनि रावल र कुँवरहरुको विशेषाधिकार स्थापित गरे । त्यसैले सुदूरपश्चिममा उर्लिएको जनसागर भीम रावलप्रतिको असहमति र आक्रोश पनि हो ।
ओली सरकारले सुदूरपश्चिमलाई दिनुपर्ने जति प्राथमिकता त दिएको छैन । तर पनि केही भावनात्मक रुपमा प्रभाव पार्ने पहलकदमी यस सरकारले लिएको छ । पञ्चायतकालदेखि कुनै शासकले बोल्न नसकेको कालापानीको मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सीमा रहेकै बेला मुखररुपमा व्यक्त गरे । एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ स्पष्ट अडान राखे । लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमित भूमि प्रक्रियासम्मत तवरले नक्सामा समेटिदिए । अब भावी पुस्ताले पनि स्पष्टसँग मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् ।
स्वयं कालापानी क्षेत्रका छाङ्रु, व्यास र तिंकर क्षेत्रका जनताको कस्टसाध्य दैनिकीमा दशकौँदेखि राज्य बेखबर रहँदै आएको थियो । त्यस क्षेत्रका जनता पनि नेपाली हुन्, नेपाल राज्य तिनको साथमा छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि ओली सरकार नै आउनुपर्यो । त्यही क्षेत्रका नेता गणेशसिंह ठगुन्नालाई ओलीले मन्त्री नै बनाइदिए । काठमाडौँले पूरै बेवास्ता गरेको र भारतले घाइते बताएको कालापानी क्षेत्रको जनजिन्दगीमा मल्हमपट्टी लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका विशेष फौज बाह्रै महिना बस्ने गरी पठाएको छ । दार्चुलाको खलंगादेखि तिंकरसम्मको बाटो सेनालाई युद्धस्तरमा परिचालन गरी सम्पन्न गरिँदै छ । आफ्नै लेकबेँसी गर्न पनि भारतको बाटो भएर हिँड्नुपर्ने र भारतीयका अपमानपूर्ण व्यवहार सहनुपर्ने विवशता हटेको छ ।
यस्तै, २३ वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने छनक मिलेको छ । ९० वर्षदेखि दोधारा–चाँदनीका बासिन्दाले महाकालीबाट बाढीबाहेक केही पाएनन् । शारदा ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौताअनुसार सिँचाइँका निम्ति पाउनुपर्ने पानीमा अहिलेसम्म कुनै शासकले दावी गरेनन् । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जन्मिनुपर्यो । र, भर्खर मात्र भारत त्यसका निम्ति तयार भएको छ । यसकारण पनि ओली सरकारप्रति सुदूरपश्चिमको भावनात्मक लगाव बढेको छ ।
विगतमा भीम रावल पटकपटक पर्यटन, गृह, रक्षा आदि मन्त्रालय सम्हालेर सिंहदबार पुगे । हरेक चुनावमा सांसद बनाएर पठाए । तर, तिनले कालापानीको घाउ देखेनन् । जनताको जलेको मन र तड्पिएको आत्मालाई महसुस गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा, सुदूरपश्चिमका भोकानांगा जनताको जीवनमा केही देखिने परिवर्तन गर्छन् कि भनेर बारम्बार अवसर भीम रावललाई पार्टीले दियो । तर, रावलले आफ्नो जीवनस्तर त राम्रैसँग उकासे । जनताका समस्या २० को १९ पनि भएन ।
स्वयं रावलकै जिल्ला अछाम जानका लागि चिसापानीबाट सय किलोमिटर पनि नपर्ने बाटो बन्न सक्ने हुँदाहुँदै डडेल्धुराको चिसो खाएर झण्डै ४ सय किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ । सर्वेक्षण भएको ५० वर्ष भएको छ । त्यसमध्ये रावल सत्तामा राइँदाइँ गर्न पुगेको मात्र पनि २६ वर्ष भइसकेको छ । भीम रावलले चाहेको भए अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटीदेखि हुम्ला र मुगुका जनताको समेत जीवन कायापलट हुन सक्ने यस्ता योजना सम्पन्न गर्नबाट कसैले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन, छैन । तर, उनलाई सुदूरपश्चिम हेर्ने फुर्सदै भएन ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । भीम रावलमा एउटा राणाकालीन सोच छ । उनी समस्या लिएर पुग्ने जनता र तर्क गर्ने कार्यकर्तालाई बन्दुक देखाउँछन् । सुदूरपश्चिमका जनता टाठाबाठा भएमा आफ्नो गाथगादी ताक्छन् भन्ने भ्रमपूर्ण सोच । पार्टीभित्र एउटा क्षमतावान् नेतृत्व जन्मिए आफू विस्थापित भइन्छ भन्ने बुझाइ छ । आफ्नो राजनीति जोगाइराख्नका लागि आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई सधैँ समस्यामा राखिरहनुपर्छ भन्ने म्याद गुज्रिएको संकुचित अवधारणा छ । तर, रावलले बुझ्न सकेको देखिएन कि समय उनीभन्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ । सुदूरपश्चिमका जनताको चेतनामा अब उनले बिर्को लगाउन खोजेर लाग्नेवाला छैन । विकासको रफ्तार उनले रोकेर रोकिनेवाला छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, जुन दिन लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटियो, त्यही दिनबाट यिनीहरुको टाउको दुख्यो । हुन पनि सुदूरपश्चिममा लागेको भारतीय घाउको उपचार खोजिँदा संसारभरको नेपाली मनमा खुसी, उत्साह र आशाको सञ्चार हुने तर भीम रावल दुःखी आत्मा भएर तड्पिएर हिँड्नुपर्ने किन ? शासकीय निरीहता, विदेशीको थिचोमिचो र चलखेलका कारण सधैँ दबिएको मनोविज्ञानमा बाँच्नुपर्ने हामी ? बाह्य विश्वमा नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित हुँदा भीम रावलहरु किन छट्पटिन्छन् ? सुदूरपश्चिमका जनताले आज यो प्रश्न गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका एमालेहरुले भीम रावललाई भनिरहेका छन्, ‘खबरदार, प्रचण्डको विध्वंशकारी पथमा लागेर आफ्नै घरमा आगो झोँस्न नहिँड । त्यो आगोले पहिला तिम्रो आफ्नै राजनीतिलाई समाप्त पार्नेछ ।’